Man City oo garoonkeeda Etihad si dirqi ah saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Brighton…+SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(Manchester) 13 Jan 2021. Manchester City ayaa guul kaga gaartay garoonkeeda Etihad kooxda Brighton & Hove Albion, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 44-aad Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda Phil Foden, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Kevin De Bruyne.
Daqiiqadii 90-aad kooxda Manchester City ayaa loo dhigay rigoore waxaana ka qasaariyay xiddigooda reer England ee Raheem Sterling.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-0 ay Manchester City kaga adkaatay kooxda Brighton & Hove Albion oo marti ugu aheyd garoonka Etihad, Sky Blue ayaana haatan soo fariisatay booska saddexaad ee kala sareynta horyaalka Premier League, iyaga oo leh 32 dhibcood.
Tababare Pep Guardiola oo la filayo inuu dib ugu laabto Kooxdiisii hore ee Barcelona, Xaaskiisa & Mid ka mid ah carruurtiisa oo…
Horseed vs Raadsan: Kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League oo galabta ka dhaca Garoonka Eng. Yariisow
“Waxaan sameeyay wax walba ee ii suurtogaliyay inaan la tartamo xiddigaha Ronaldo iyo Messi” – Van Dijk